.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Bigasoft Facebook Downloader
Facebook ကို နေ့တိုင်းလိုလို အသုံးပြုနေကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေဆိုရင် ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ Music Video တွေနဲ့ တစ်ခြား
Video ဖိုင်တွေကို ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေ ကြည့်ရှု နားထောင်လို့ရအောင် Facebook မှာ တင်ပေးတတ်ကြပါတယ်။
အဲဒီအထဲက ကိုယ်အရမ်း ကြိုက်တဲ့ Video ဖိုင်တွေကို ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီး ကြည့်ချင်တာတို့ ၊ Music Video တွေဆိုရင်
Mp3 ပြောင်းပြီး ဖုန်းနဲ့နားထောင်ချင်တာတို့ဆို ဒီ Bigasoft Facebook Downloader လေးက အဆင်ပြေမှာပါ။
Facebook က Video တွေကို ဒေါင်းလို့ရတယ်။ ပြီးတော့ mp3, mp4 စတဲ့ Audio, Video ဖော်မက်ပေါင်းများစွာ
ပြောင်းလို့ရပါတယ်။ စက်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ Audio ဖိုင်တွေ ၊ Video ဖိုင်တွေကိုလည်း ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ဖော်မက်ပြောင်းလို့
ရပါတယ်။ ဆော့ဝဲလ်ဖိုင်ဆိုဒ်ကလည်း 12 MB တည်းပါ။ လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်နော်။
မူရင်းဆော့ဝဲလ်က Full Version မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော် ကီးထည့်ပြီးတော့ Portable လေး လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Download: Bigasoft Facebook Downloader
Size: 12 MB [ Full Version/ Portable ]
Full Version ဖြစ်အောင်နဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ သုံးရလွယ်အောင် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် Portable လုပ်ပေးထားတာပါ။
သူငယ်ချင်းများအားလုံး အဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်..။ စေတနာဖြင့် Thurainlin
Labels: Converter, Downloader, Facebook, Software